Torohevitra be kokoa
Fanontaniana miverina matetika
Lisitry ny mailaka manaraka
Baogy & hataka
Status: Tokony mandeha avokoa ny fitaovana aseho eto amin'ity pehy ity, na dia izany aza mbola am-panamboarana ny API ary mety hiova na oviana na oviana. Araho amin'ny alalan'ny fisoratana ny mailakao ao amin'ny the mediawiki-api-announce lisitra fampielezana ny fiovana.
Hataka diso: Rehefa alefa ao amin'i API ny hata, ho alefa miaraka amin'ny lakile "MediaWiki-API-Error" ny header HTTP ary samy homen-tsanda mitovy ny header ary ny kaodin-kadisoana. Ho an'ny torohay fanampiny dia jereo https://www.mediawiki.org/wiki/API:Errors_and_warnings.
Inona ny zavatra ho atao.
Mampiasa ny API fifanovana ny wiki
Accordé à : all, usersy bot
Accordé à : botsy sysop